Fampianarana Mamaky Teny sy Manoratra any Meksika
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Armenianina Bichlamar Boligara Cebuano Chichewa Chitonga Chitumbuka Cinghalais Danoà Espaniola Estonianina Failandey Fidjianina Frantsay Grika Géorgien Hebreo Hiligaynon Holandey Hongroà Icibemba Iloko Indonezianina Iokrenianina Italianina Japoney Kikaonde Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Koreanina Kroaty Lingala Litoanianina Luvale Malagasy Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Masedonianina Myama Norvezianina Oromo Poloney Portogey Romanianina Rosianina Sepedi Serba Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Silozi Slovaky Slovenianina Soedoà Swahili Swahili (Congo) Tagalog Tahisianina Tailandey Tigrigna Tiorka Tok Pisin Tseky Tsonga Twi Vietnamianina Xhosa Zoloa Éwé
An-tapitrisany maro no efa navoaka tamin’ilay boky hoe Miezaha Mamaky Teny sy Manoratra, tamin’ny fiteny 100 mahery
“Anisan’ny zon’olombelona ny hoe mahay taratasy. Mahatonga ny tsirairay hahavita tena izany, sady mampivoatra ny fiaraha-monina.”—UNESCO. *
HITA tamin’ny tatitra fa olona 15 taona no ho miakatra miisa 700 tapitrisa mahery no tsy mahay mamaky teny sy manoratra. Betsaka ny zavatra mety tsy ho fantatr’izy ireo, anisan’izany ireo fampianarana “nosoratana ho fianarantsika”, ao amin’ny Baiboly. (Romanina 15:4) Mampianatra mamaky teny sy manoratra àry ny Vavolombelon’i Jehovah, any amin’ny tany maro, ary maimaim-poana izany. Nisy vokany ve ilay izy?
Diniho ny ataon’ny Vavolombelona any Meksika. Olona 152 000 mahery no efa nampianarin’izy ireo hamaky teny sy hanoratra, nanomboka tamin’ny 1946. Lasa nampianatra ny hafa koa ny maro tamin’izy ireny. Betsaka ny taratasy fankasitrahana azon’ny Vavolombelona avy amin’ny fanjakana, noho ny asan’izy ireo. Izao no voalazan’ny taratasy iray: ‘Mankasitraka anareo izahay satria miara-miasa aminay ianareo mba hampandrosoana ny fampianarana ny olon-dehibe.’
Samy mandray soa amin’ilay fianarana na ny antitra na ny tanora. Efa 101 taona, ohatra, i Josefina tamin’izy nisoratra anarana tamin’ilay fianarana, ary vitany tao anatin’ny roa taona ilay izy.
Ny teny espaniola no fiteny ofisialy any Meksika. Atao amin’ny fiteny hafa koa anefa ireo kilasy fianarana mamaky teny sy manoratra. Olona avy amin’ny foko valo samihafa no nianatra namaky teny sy nanoratra tamin’ny fiteniny, tamin’ny 2013.
Maro ny zava-baovao azo ianarana rehefa mahay mamaky teny sy manoratra. Fa ny tena zava-dehibe dia hoe lasa afaka mamaky Baiboly, izay boky avy amin’Andriamanitra, ny karazan’olona rehetra. Lasa afaka amin’ny finoanoam-poana sy ny fampianaran-diso ary ny fitondran-tena ratsy izy ireo.—Jaona 8:32.
^ feh. 2 Sampan-draharahan’ny Firenena Mikambana Misahana ny Fanabeazana sy ny Siansa ary ny Kolontsaina.
GAGA NY FIANAKAVIANY
Nianatra Tenin’ny Tanana Meksikanina tamin’ny alalan’ny DVD i Daniel
Marenina i Daniel ka tsy mahay miresaka tsara. Matetika àry izy no tezitra sy mivazavaza amin’ny fianakaviany. Nianatra Baiboly tamin’i Josué i Daniel tamin’izy 23 taona teo ho eo. Vavolombelon’i Jehovah i Josué ary marenina koa izy. Fihetsika sy sary no nampiasain’izy ireo tamin’ny voalohany. Nianatra Tenin’ny Tanana Meksikanina tamin’ny alalan’ny DVD i Daniel avy eo. *
Nanaraka ny fampianaran’ny Baiboly i Daniel, ka niezaka ny hanana “toetra vaovao” toy ny “fangoraham-po, hatsaram-panahy, fanetren-tena, fahalemem-panahy, ary fahari-po.” (Kolosianina 3:10, 12) Nampihariny koa ilay hoe tokony hankatoavina sy hohajaina ny ray aman-dreny. (Efesianina 6:1, 2) Gaga ny fianakaviany! Latsa-dranomaso ny reniny rehefa nisaotra an’i Josué noho izy nanampy ny zanany. Nahafeno fepetra ho lasa Vavolombelon’i Jehovah i Daniel ka natao batisa tamin’ny 2007.
^ feh. 12 Efa 46 izao ny bokin’ny Vavolombelon’i Jehovah natao DVD amin’ny Tenin’ny Tanana Meksikanina. Misy boky amin’ny tenin’ny tanana 80 eo ho eo ao amin’ny tranonkalanay, jw.org. Misy amin’ny soratra Braille koa ny boky sasany, ka mandray soa ny jamba.
Aogositra 2015 | Toy ny Fitehirizam-boky ny Selanao!
MIFOHAZA! Aogositra 2015 | Toy ny Fitehirizam-boky ny Selanao!
An’arivony no Mianatra Mamaky Teny sy Manoratra
Baiboly Roa Metatra